januar 2021 - NorSom News
Asker: 1,7 milyan ayay Konto qaldan u direen.
Norsomnews - 30. januar 2021
Frp: Ajaaniibta halaga joojiyo lacagta hawl-gabka(Pensjon)
Norsomnews - 29. januar 2021
Dowlada oo 323 milyan u qoondeysay ajaaniibta
Dowlada oo fursad kale siineyso dad uu ka dhamaaday xaq-lahaanshaha «Dagpengerka»
Norsomnews - 28. januar 2021
Baarlamaanka Norway oo looga hadlay kiiska nin Somaliland toogasho looga xukumay.
Dowlada oo «praktikal» ahaan xireyso xuduudaha Norway
Norsomnews - 27. januar 2021
Maxkamad go’aan ka gaartay 3-dii nin ee qarxin rabay dhismaha Soomaalida
Qorshihii dowlada ee dhameystirka talaalka oo dib u dhac uu ku imaan karo.
Maxkamada Yurub oo mar kale u kala garqaadeyso hooyo soomaali ah iyo dowlada Norway.
Moss: 28 qof oo lagu duray laban-laabka xajmiga daawada talaalka Corona ee qofka loogu talagalay.
Romsdal: Hooyo loo maxkamadeynayo jirdilka iyo u hanjabaada caruurteeda
Norsomnews - 26. januar 2021
543.000 qof oo soo degsatay App-ka smitte-stopp
USA: Norway naloogama imaan karo.
Wuxuu amar ku bixiyay inaan «Hytte» loo safrin, isagii ayaana «hytte» ku maqnaa
Daawo: Dr Ayaan Bashiir: Wax ka ogow nooca cusub ee Corona iyo halistiisa
Deg-deg: Dowlada oo xirtay senterka iyo dukaamada Oslo + 9 degmo oo kale.
Wiilkan soomaaliga ah oo wali la la´yahay. Booliska: Ha Nala caawiyo
Norsomnews - 20. januar 2021
Booliska oo 100% kordhiyay ganaaxyada Corona-virus.
Siyaasi ayuu Facebook ugu hanjabay: Xukun 10 bilood oo xabsi ah.
Norsomnews - 19. januar 2021
Daawo: Shirka jaraa´id ee R.W Solberg oo af soomaali ah.